लघुकथाः के गर्छस मंगले,आफ्नै ढंगले « Sansar News
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:१०
गर्धनेले पनि दलमर्दनको सास्ती नखेपेको त कहाँ हो र ? कतिचोटी त दलमर्दनले बिना कसुर चोरको आरोप लगाएर नभकुरेको पनि होईन । भोटको बेलामा अर्कोलाई सघाईस भनेर झण्डै मारेथे । तर अहिले दलमर्दन मन्त्री भएपछि गर्धनेले त्यो सबै खोई कसरी भुल्यो ? दलमर्दनकै नोकर भएर बसेको छ । यतिमात्र त कहाँ हो र । आजभोली त उ दलमर्दनको आडमा आफ्नै बाल्यकाल देखि सँगै हुर्केका साथीसंगी, छरछिमेकी धरिलाई हप्काई दप्काई गर्न पटक्कै हिचकिचाँउदैन । साथीभाइहरू उसको यो व्यवहारले अचम्मित हुँदै भन्छन ‘होईन यो गर्धनेले त दलमर्दनको नोकर हुनुलाई पनि मन्त्री नै भएजस्तो पो संझिन्छ त हौ ? मन्त्रीको नोकर हुँदापनि यति बिघ्न फुटानी ? यति बिघ्न अंधो हुनुपर्छ र ? भोली यसलाई साथीभाई, आफन्त,छरछिमेकी कोही चाँहिदैन कि के हो ? यो मन्त्रीपद जनताले दिएर पो पाए त यीनको बाँचुन्जेलको विर्तै त होईन नि हौ गाँठ्ठे !’
नभन्दै यसपाली दलमर्दनको पार्टीलाई अविस्वासको प्रस्ताव ल्याएर अर्को पार्टीले सरकार गठन गर्यो । दलमर्दनलाई आफ्नै गाँउमा आएर बस्ने साहससम्म पनि भएन । उनी आजभोली मणि हराएको सर्प जस्तो भएर सहरमा भाडाघरमा बसेका छन ।
गर्धनेले तनखा नपाएको पनि छ महिना बितिसक्यो । जाँउ मागौं । आँटै आँउदैन । नमागौं घरमा स्वास्नी छोराछोरी भोकले फिटफिटी भैसके साथीभाइ छरछिमेकीसँग सहयोग माग्ने ठाँउ सम्मपनि राखेको छैन । आजभोली गर्धनेलाई उति बेलाआफु मात्तिएको र पात्तीएको आभाष हुनथालेको छ । हिजो अस्ती बोलेका र गरेका दुर्व्यवहार सम्झदाँ उसलाई ‘हगि सक्यो दैलो देख्यो भनेझैं’ आफ्नो खाल्टो आफैंले खनिएछ भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।अनि मनमनै आफ्नो मूल्यांकन उ यसरी गर्छ ‘बाँदर बाठोभयो भने कि त सुकेको रुखको हाँगामा गएर मच्चाउछ र हाँगा भाँच्चीएर भिरमा खसेर मर्छ कि त काठकाट्ने धरानमा चडेर आधा चिरेको मुडाभित्र राजकानी छिराएर अगाडीको फेसा झिकेर राजकानी चेपाएर मर्छ भन्थे हो र छ नि हौ ।’